163 ။ နှစ်ပေါင်း Ankara ဘူတာတွင်စိတ်အားထက်သန်မှု - RayHaber
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီတူရကီမီးရထားဘူတာရုံxnumx.yıl Enthusiasm နဲ့ခုနှစ်တွင်
24 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, PHOTOS, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
တူရကီ Gary တစ်နှစ်တာ Enthusiasm နဲ့
TCDD 163 ။ အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲစီးရီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာများ၏İzmirပြည်နယ်ဆငျဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်း TCDD, တူရကီရထားဘူတာတွင်ကျင်းပခဲ့သည်အောက်မှာနှစ်မြောက်လှုပ်ရှားမှုများ။
TCDD ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အစ္စမေးလ်ခေတ်နှင့် railwaymen နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူတွေ Akben ပါဝင်ခြင်းနှင့်အတူရာအရပ်ကိုယူသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနသည်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Fine ၏ဝိဇ္ဇာ Necmettin ဖျော်ဖြေပွဲကြီးမြတ်စိတ်ဝင်စားမှုပြသခဲ့ကြသည်။
မကြာသေးမီကခေတ်တာဝန်စက်ပြင် Recep Tunaboylu တစ်အာဇာနည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်မျိုးချစ် Sadat သူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာအခိုက်အသနားတျောမူပါဟုကျေးဇူးတင်စရာသူတို့ကယ်တင်ကြလော့
"ဟုအဆိုပါ Izmir-Aydin တူရကီမီးရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေး၏ 23 1856 စက်တင်ဘာလ 163 စအဦး၌။ ကျနော်တို့အတူတကွမာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို၏နှစ်ပတ်လည်နေ့၏နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပနေခံရဖို့နေထိုင်နေကြရသည်။ "
TCDD ရုံရထားလမ်းကုမ္ပဏီကိုလည်းလွတ်မြောက်ရေးစစ်ပွဲ၏ဌာနချုပ်အလေးပေးဦးဆောင်ရှိရာတည်နေရာဖြစ်ပါသည်မဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ်အောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များကိုအသုံးပြု:
"တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံမဟုတ်တစ်ခုသာမီးရထားကုမ္ပဏီကိုလည်းလွတ်မြောက်ရေးစစ်ပွဲ၏ဌာနချုပ်ဖြစ်ပါတယ်, ရွာ, Non-စာအုပ်စာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ်ပင်ကျောင်းက, biilaçကျေးလက်ဆေးရုံ, ပြည်ပမှာအနေဖြင့်စာလုံးများကိုတင်ဆောင်သောပြည်မီးရထား, Anatolia, မြေထဲပင်လယ်ကနေကမ္ဘာကိုဖွင့်လှစ်မယ့် port ကို, အာရှစီမံခန့်ခွဲ နှင့်ပင်လယ်၏အောက်ဆုံးမှဥရောပချိတ်ဆက်နေတဲ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ကုန်ပစ္စည်း၏သိုလှောင်မှုအတွက်မဟာဗျူဟာစင်တာပင်လယ်ရပ်ခြားနိုင်ငံများ, တိုက်ကြီးနဲ့အခွားသူမြားစှာကိုသွားပါလိမ့်မယ်ပင်လယ်ကိုမြန်နှုန်းမြင့် Interconnection demirağနေကြတယ်။ "
ဝန်ထမ်းမိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာခံစားရရှိသမျှကိုငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသည်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်ငါ့အလိုရှိသမျှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ Gazi Mustafa Kemal Atatürkရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုအလေးပေးသော၏အရေးပါမှု၏ရထားလမ်း၌ဤလမ်းလျှောက်အတွက်ရထားလမ်းကျော် "မီးရထားယဉ်ကျေးမှုနှင့်သာယာဝပြောအလင်းစကားပုံ၏တိုင်းပြည်အလှဆင်ရန်ကြောင့်သန့်ရှင်းသောမီးများမှာ" ။ "
ခေတ် "Entity ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 163 ။ အဖွဲ့အစည်းကပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမကြာသေးမီကသမိုင်းအတွက်အချိန်နှစ်ပတ်လည်နေ့စိတ်အားထက်သန်ဝတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူတို့နှင့်အတူအတူတကွနေထိုင်မည်ဟုတစ်ခုလုံးကိုမြို့၏လမ်းကြောင်းပေါ်မှာငါတို့မြို့အတွက်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုစီးရီးပေးခြင်းနှင့်တူရကီ-Kars လမ်းကြောင်းအတွင်းရှိမြို့ခရီးသွားအဘိဓါန် Eastern Express ၏ဂုဏ်အသရေကမ်းလှမ်း, ကြှနျုပျတို့ခဲ့ပါတယ်။ İzmirပြည်နယ်ဆငျဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်းကဒီပျော်ရွှင်နေ့ကဂုဏ်ပြုရထားလမ်းနှင့် railwaymen တင်ဆောင်လာသောကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုး၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထပ်လေးစားမှု, ချစ်ခြင်းနှင့်တကွသင်တို့ရှိသမျှကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏, ကျေးဇူးတော်များအတွက်အနုပညာရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "သူကဆိုသည်။
İzmirပြည်နယ်ဆငျဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်းအနုပညာရှင်များ, စက်တင်ဘာလ 28 Erzincan, Erzurum သည်အထိအမိန့်များ၏နယ်ပယ်အတွင်း Tour ဖျော်ဖြေပွဲ, Kars နှင့် Sivas Divrigi အတွက်ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Haydarpasa ရထားဘူတာသမ္မတနိုင်ငံမှာစိတ်အားထက်သန်မှု 29 / 10 / 2015 ရီပတ်ဘလီကန် Enthusiasm နဲ့များတွင် Haydarpasa ရထားဘူတာ: Kadıköyမြူနီစီပယ်ယခုနှစ်ပထမဦးဆုံးသမ္မတနိုင်ငံနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပ၏ခေါင်းစဉ်ကိုကစီစဉ် "ငွိမျးခမျြးအတွက်ရီပတ်ဘလစ်ကန်" ဟုအဆိုပါHaydarpaşaရထားဘူတာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Kadikoy ၏ရာပေါင်းများစွာ၏အခမ်းအနားများတွင်နေ့စွဲ Haydarpasa မီးရထားဘူတာမနေ့ကညဦးယံအချိန်တူရကီအလံနှင့်အတူဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သည် "ဓါတ်ပုံသမ္မတနိုင်ငံ" ၌ "သမ္မတနိုင်ငံည" ဖြစ်ရပ်ကြုံတွေ့ရတစ်ဦးကကြီးမားသော ebullient ကိုလည်းပြပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်, ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ İlberOrtaylı "ပညာရေးအတွက်တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ" ဟုစကားပြောဆိုမှုကျင်းပခဲ့တယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ဆငျဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်းမှာလည်းသမ္မတနိုင်ငံရေးစပ်သီအပေါ်ဖျော်ဖြေ။ "သမ်မတနိုငျငံ 92 အတွက်သမိုင်း Haydarpasa ရထားဘူတာ။ ကျနော်တို့တစ်နှစ်တာအခမ်းအနားနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို၏စိတ်အားထက်သန်မှုခံစားရတယ်" Kadikoy မြို့တော်ဝန် Aykurt Nuhoğlu "ဟုအဆိုပါသမ္မတနိုင်ငံနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ကြဉ်းသောတန်ဖိုးများများဆုတ်ခွာပြောကြားခဲ့့သည်က ...
သမ္မတနိုင်ငံနေ့ Enthusiasm နဲ့အပေါ် Silkworm 30 / 10 / 2013 သမ္မတနိုင်ငံနေ့ Enthusiasm နဲ့အပေါ် Silkworm: အဆိုပါသမ္မတနိုင်ငံ 90 ။ နှစ်ပတ်လည်နေ့ Bursa အတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်တုများ၏ရှေ့မှောက်၌ကျင်းပ Ataturk သတိရအောက်မေ့အခမ်းအနားသည်မြို့တော်မြူနီစီပယ် '' ပိုး '' ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင်ထုတ်လုပ်ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းလမ်းရထားမှတ်သားခဲ့သည်။ အဘယ်မှာရှိကျောင်းသားများကဗျာကိုဖတ်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားများအခမ်းအနားပူဇော်ပြသစိတ်ဝင်စားမှုပြသသည်။ 29 အောက်တိုဘာလသမ္မတနိုင်ငံခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာထုတ်လုပ်တှငျကငျြးပခဲ့ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နေ့ချီတက်ပွဲအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အဒေသခံလမ်းရထား Silkworm အားဖြင့်မှတ်သားခဲ့သည်။ ဓါတ်ရထား, စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူနိုင်ငံသားများအချို့နောက်တော်သို့လိုက်သည့် silkworm ၏ရုပ်ပုံများကိုဆွဲငင်။ သမ္မတနိုင်ငံလမ်းအတွက်လမ်းလျှောက်အတူအဆုံးသတ်အခမ်းအနားကို
Beyoglu လွမ်းဆွတ်ဓါတ်ရထား istikal အတွက်သစ်ကိုယခုနှစ် Sephora စိတ်အားထက်သန်မှု, 18 / 12 / 2015 သစ်ကိုယခုနှစ် Sephora စိတ်အားထက်သန်ခြင်း, istikal Beyoglu လွမ်းဆွတ်ဓါတ်ရထား: အနှလုံးခုန် Sephora အလှအပ Beyoglu အတွက်လွမ်းဆွတ်လမ်းရထားနှင့်အတူသစ်ကိုယခုနှစ်အစောပိုင်းကတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Sephora, ပျော်စရာ၏အသစ်တစ်ခုစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူ Beyoglu တစ်နှစ်အတွက်လွမ်းဆွတ်လမ်းရထားဆင်ယင်ခြယ်! ဒီဇင်ဘာလ 18 နေ့မှ 25 နှင့် 2015 12: 00-18: Sephora အဆိုတော်လည်း Sephora Galactic မိန်းကလေးသို့လုပ်ရမည်အထူးလုပ်-Up နှင့်အတူသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာဝမ်းမြောက် add ပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာ Up ကို Make နေစဉ်, 00 နာရီအကြားရွှေ့မည်သည့်လမ်းရထားထဲမှာတစ်ဦးကပျော်စရာဂီတအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။ အဆိုပါလမ်းရထားနီးနီးကပ်ကပ်လူတိုင်းရဲ့မိတ်ကပ်မှကျေးဇူးတင်စကား, မိတ်ကပ်အကြံပြုချက်များလူတိုင်းနှစ်သစ်လာအောင်နှိုးဆွစေခံရဖို့ဖန်သားပြင်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Sephora ကနေအားလုံးက Galaxy FORaGift! ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်ချက်ချင်းဝေမျှဖို့ Sephora ဆုကြေးဇူးကိုလမ်းရထား ...
Gordes မှကတ္တရာ၏ 163 ကီလိုမီတာ 19 / 06 / 2018 Manisa တဲ့ Metropolitan ၏ပြည်နယ်မှာကတ္တရာ Manisa မြူနီစီပယ်လှုံ့ဆျောနဲ့စတင်ရမည်, ကျန်ရှိနေသေးသောနှစ်များတွင်4လမ်းကို3383 တထောင်ကီလိုမီတာခင်းခေါက်။ အဘယ်သူသည်ကတ္တရာလျှောက်လွှာ၏ 163 ကီလိုမီတာဖျော်ဖြေခဲ့သည်ကိုလည်းအလုပ် Gordes Manisa မြူနီစီပယ်ရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရပ်ကွက်ကတ္တရာအိပ်မက်၏ကံကြမ္မာပြောင်းလဲသွားတယ်။ အဆိုပါကတ္တရာသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ပိုပြီးအဆင်ပြေလမ်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ပြည်နယ်အနှံ့နိုင်ငံသားများ Manisa မြူနီစီပယ်ရွှေ့ဖို့စတင်ခဲ့, အလုပ်တစ်ချိုးစရာမလိုဘဲဆက်လက်။ တထောင်ကီလိုမီတာနောက်ကွယ်မှကျန်ရှိသော4နှစ်များတွင်တာဝန်များ၏ဧရိယာ၌ခင်းခဲ့ကြသည့် Manisa မြူနီစီပယ်ရဲ့3383 နှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ငံသားတွေအဆင်ပြေနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သဘောပေါက်ကတ္တရာ applications များ ...
တူရကီ Automotive သမိုင်းပထမနှစ်တွင်5163 လာရောက်လည်ပတ်သူများ၏မကျြမှောကျ၌နာကျင်မှု 27 / 10 / 20145တစ်နှစ် 163 လာရောက်လည်ပတ်သူများတူရကီမော်တော်ကားသမိုင်းရဲ့ပထမဆုံးမျက်လုံးနာကျင်မှု: 1961 တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးတိုင်းရင်းသားကားတစ်စီး "တော်လှန်ရေးအတွက်ထုတ်လုပ်Eskişehirမီးရထားစက်ရုံများကိုသမ္မတ Cemal Gursel ရဲ့ညွှန်ကြားချက်၌ကာလ, တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုဝန်ကြီးအဖြစ် (TÜLOMSAŞ) ထိုသရုပ်ပြ5163 နှစ်ပေါင်းတထောင်ကလူသွားရောက်ခဲ့သည်။ TÜLOMSAŞ၌နေသောထို့နောက်Eskişehirမီးရထားစက်ရုံကိုခေါ် Advertising နိုင်ငံတော်သမ္မတGürsel၏သွန်သင်, တာယာရှေ့နှင့်လုံးဝတစ်လထုတ်လုပ် 4,5 တော်လှန်ရေး၏နောက်ဘက်ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ဒေသခံတွေအဖြစ်, 1961 တူရကီအတွက်မီးရထားခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ကာလ ရထားလမ်းဆိုင်ရာဥပဒေများက 'တင့်ကားအတွင်းရှိထားရန်စမ်းသပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်' 'တော်လှန်ရေး' 'ပတေရုသထွက်သည့်အခါGürselရဲ့အသုံးပြုမှုလျော့နည်းလောင်စာဆီမလိုအပ် ...
သမ္မတနိုင်ငံနေ့ Enthusiasm နဲ့အပေါ် Silkworm
Beyoglu လွမ်းဆွတ်ဓါတ်ရထား istikal အတွက်သစ်ကိုယခုနှစ် Sephora စိတ်အားထက်သန်မှု,
Gordes မှကတ္တရာ၏ 163 ကီလိုမီတာ
တူရကီ Automotive သမိုင်းပထမနှစ်တွင်5163 လာရောက်လည်ပတ်သူများ၏မကျြမှောကျ၌နာကျင်မှု
cable ကိုကားထဲတွင်ရီပတ်ဘလီကန် Enthusiasm နဲ့ (ဗီဒီယို - ဓာတ်ပုံပြခန်း)
Palandökenနှစ်သစ်ကူး Enthusiasm နဲ့
Izmir အတွက်ကေဘယ်လ်ကားစိတ်အားထက်သန်မှု (ဓာတ်ပုံပြခန်း)